विगतका सहकर्मीबीच अहिले रोचक प्रतिस्पर्धी,को को भिड्दै ? « Naya Page
विगतका सहकर्मीबीच अहिले रोचक प्रतिस्पर्धी,को को भिड्दै ?
काठमाडौं: १८ दिन अगाडिसम्म राजपाको एउटै कमिटीमा रहेका महेन्द्र राय यादव र जंगीलाल राय आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
महेन्द्र राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता हुन् भने जंगीलाल महासचिव। अहिले महेन्द्र राजपाबाटै सर्लाही २ मा उम्मेदवार छन् भने जंगीलाल कांग्रेसबाट चुनाव लड्दैछन्। ‘हामी दुईबीचको सम्बन्ध राजनीतिक मात्रै हो, व्यक्तिगत होइन,’ बिहीबार सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–३ पुगेका जंगीलालले भने, ‘राजनीतिमा योसँग चुनाव लड्ने, योसँग नलड्ने भन्ने हुँदैन। जो अगाडि आउँछ, उसैसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिले महेन्द्रजीसँग हुँदै छ।’
महेन्द्र र जंगीलाल मात्रै होइन, अन्य केही नेता पनि विगतका आफ्नै सहकर्मीसँग चुनाव लड्दै छन्। यस्तैमा पर्छन्(मोहनसिंह राठौर र झपटबहादुर रावल। उनीहरू दुवै कैलाली २ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। राठौर कांग्रेसको रुख चिह्नमा र रावल एमालेको सूर्य चिह्न लिएर मैदानमा छन्। यी दुई नेता उम्मेदवारी मनोनयन ९कात्तिक १६० को दुई दिन अगाडिसम्म एउटै पार्टी एमालेमा थिए। ०५६ र ०७० को निर्वाचनमा एमालेबाट कैलाली २ मा जितेका राठौरलाई यसपटक पार्टीले टिकट नदिने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका हुन्। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कैलालीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कैलाली २ मा मात्रै एमालेले जितेको थियो।
अझ रोचक पक्ष त राठौर र रावलबीच २०६३ सालमा मन्त्री र पिएको सम्बन्ध थियो। राठौर ०६२र०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिमकालको मन्त्रिपरिषद्का शिक्षा राज्यमन्त्री थिए भने झपट उनका पिए। झपट भीम रावल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदासमेत पिए नै थिए।
गोरखा २ मा पनि विगतका आफ्नै सहकर्मी अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लामो समयसम्म माओवादीमा एकै हैसियतमा कार्यरत थिए। ०६५ सालदेखि यी दुई नेता माओवादीको उपाध्यक्ष थिए। तर, दुई वर्षअगाडि डा। भट्टराईले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए।
डा। भट्टराई आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्न आँखा लिएर मैदानमा छन् भने श्रेष्ठ गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाबाट चुनाव लड्दै छन्। भट्टराईलाई कांग्रेको र श्रेष्ठलाई एमालेको साथ छ।
सल्यान र सप्तरीमा पनि माओवादी र राजपाका नेताहरूले आफ्नै विगतका सहकर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। सल्यानमा विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता टेकबहादुर बस्नेतसँग स्वतन्त्रबाट आफ्नै सहकर्मी उमाकान्त शर्मा तथा सप्तरीको २ को प्रदेशसभा २ मा राजपा महामन्त्री मनीष सुमनसँग क्षेत्रीय सभापति लक्ष्मण यादव स्वतन्त्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।